Indlela ukukhetha-mveliso yoshicilelo incwadi enamandla kunye oluthembekileyo oluvela kumashishini ezininzi woshicilelo china?-Blog-Book Printing China
Indlela ukukhetha-mveliso yoshicilelo incwadi enamandla kunye oluthembekileyo oluvela kumashishini ezininzi woshicilelo china?
Time: 2017-01-22 hits: 238
Ungayikhetha njani into enamandla nethembekileyo umzi-mveliso wokushicilela iincwadi kumashishini amaninzi okushicilela e-china? You don't have to worry about finding a good book printer. Apha ndiza kukunika impendulo ngendlela yokukhetha umzi-mveliso wokushicilela onokukhawuleza kwaye ulunge.
Ungawukhetha njani umzi-mveliso onamandla nothembekileyo wokushicilela iincwadi kumashishini amaninzi okushicilela? You don't have to worry about finding a good umshicileli wencwadi. Apha ndiza kukunika impendulo ngendlela yokukhetha umzi-mveliso wokushicilela onokukhawuleza kwaye ulunge.
Icandelo lokushicilela ukubona umgangatho,okona kubaluleke kakhulu kukubona izixhobo zokuprinta, izixhobo ekubunjweni umgangatho, Umatshini wokushicilela waseHeidelberg waziwa kakuhle kolu shishino. Ukuthambisa ioyile kwishishini lokushicilela, amava oshishino atyebileyo. Ukudibana kumzi-mveliso wokuprinta, umgca wemveliso yokunxibelelana nenamba, irabha ebopha umgca wemveliso yokunxibelelana nenamba, ukukhwela umgca stapler imveliso imveliso. Abaphathi kwimizi-mveliso yoshicilelo, amagcisa okushicilela.
Kunyaka omnye odlulileyo, I-BPC ukuze iqhubeke nokwandisa kunye nokwandisa iimfuno eziphezulu zokuprinta, Sazisa umatshini wokuqala wokushicilela waseJapan oyiRiubi Xinling, Umzekelo RMGT 1050AS-5, ehlotyeni lalo nyaka, apho sinobuxhakaxhaka obukhulu bokuxhasa izixhobo: Imibala emine yokushicilela iJamani uHeidelberg, UHeidelberg Shuangshuang. Oomatshini ababini bokushicilela ngombala kunye noomatshini abasibhozo bokushicilela emva koomatshini ikakhulu ngoomatshini bokugoqa iHeidelberg, Oomatshini abane bokutshixa imicu iMartini, oomatshini ababini bokubopha abazenzekelayo eMartini, oomatshini ababini baseMartini abanamacala amathathu, kunye nomgca omtsha wokunxibelelana onzima weHeidelberg. Oku kungamandla kwezixhobo zokuprinta ze-BPC.
Inyathelo nenyathelo, zethu Ukuprintwa kweencwadi eTshayina Factory in the industry's excellent technical business,ukuba ungenza ngokusesikweni ngokupheleleyo iimveliso yoshicilelo ngokweemfuno zabathengi. ngoko ke, kuye kwaqatshelwa ngamashishini ahlukeneyo kunye neempawu, njenge: Imithombo yeendaba yeDolphin, Ilanga Baby, Yichun, Ibhanki yase China, UNanpai Sanshu, Moleskine kunye namanye amashishini ezaziwayo-kakuhle. Bonke banonxibelelwano olubanzi lweshishini nathi.
BPC, ukubambelela kwimo yokuba noxanduva kubathengi, Uchitha yonke imizamo ekuveliseni iimveliso ezikumgangatho ophezulu kubathengi. Ukuba unomdla okanye unamathandabuzo malunga nendawo yethu yokushicilela incwadi, Ukuprintwa kwencwadi kuhlala kukulungele ukwamkela ukubonisana kwakho. Indawo yenkampani yile http://www.bookprintingchina.com; i-imeyile yokubonisana kwintengiso @ bookprintingchina. Abantu be-BPC bajonge phambili kuwo wonke umnxeba!
prev Page : Ukuprintwa kwencwadi - Ungakuphepha njani ukuqina kwe-inki okubangelwa bubushushu obuphantsi
Okulandelayo Page : Abantwana Incwadi Printing Plant-BPC(Bookprintingchina.com)